Mihail Vitalevich Margelov - ज्ञात statesman। हुनत सैन्य उहाँले थिएन परम्परा जारी राख्न तिनले शानदार नाम पहनता। उहाँले आफ्नो बाटो गयो र आदरणीय हाइट्स पुग्यो। आफ्नो काम अक्सर उहाँले careerism र समय-सेवा आरोप छ, आलोचना छ। तर, जीवन मा आफ्नो बाटो, को पाठ्यक्रम, रोचक र ध्यान को योग्य।
उपनाम Margelov पुरातन रूसी "हजुरबुबा मिखाइल पार्टी कार्ड issuing गर्दा Markelov 'नाम को लेखन त्रुटिहरू को परिणाम थियो। ठूलो हजुरबुबा माइकल वफादार भई उहाँले दुई पटक सेन्ट जर्ज को मानार्थ आदेश सम्मानित गरिएको लागि fatherland, सेवा गरे। Vasily Margelov - सोभियत सेना को प्रसिद्ध सामान्य हावा बलहरु को कमान्डर, "ड्रम बुबा," सोभियत संघ को हिरो - रूसी वंश को एक परिवार मा जन्म भएको थियो। यसरी परिवार महिमाको इतिहास सुरु भयो।
पाँच छोराहरू, तुलसी चार आफ्नो काम जारी राखे। भिटाली Vasilyevich - रूसी बुद्धि अधिकारी, कर्नल-जनरल, रूसी विदेशी खुफिया सेवा उप निर्देशक, पार्टी "संयुक्त रूस" बाट पछि राज्य Duma उप - बुबा माइकल। अलेक्जेन्डर - ड्रम अधिकारी, सोभियत संघ को हिरो। Gennady - मेजर जनरल। Vasily - मेजर, को प्रसारण कम्पनी "रूस" को उप निर्देशक। आफ्ना छोराछोरीलाई Vasily Filippovich को कुनै पनि पेसा गर्न मदत थिएन, तर कडाई तिनीहरूलाई सोध्नुभयो। Margelov Mihail Vitalevich, जसको परिवार साहसी मान्छे हुन्छन् उनको पूरा भएको थियो। र उहाँले भयो एक योग्य बोक्ने को उल्लेखनीय नाम। कुल तुलसी Povich दस नातिनातिनी, माइकल सबैभन्दा पुरानो हो। त्यहाँ नातिनातिनी र पत्रकार, र व्यापार मान्छे को बीच, पाँच आफ्नो पुर्खाहरूको पाइला भयो, र सैन्य भयो।
मिखाइल Margelov - राम्रो परिवारको मास्को केटा को उदाहरण। एक बच्चाको रूपमा, माइकल थियो फरक सक्रिय वर्ण र आकांक्षा नेतृत्वको उहाँले धेरै पढ्न। हजुरबुवा खेल लागि मूल्यांकन राखिदिन खोजे तर यसलाई काम गरेन। र नाति उहाँको पाइला पछ्याउने भनेर सपना पनि, छैन साँचो आयो। माइकल अप बढ्दै थियो, आफ्नो आमाबाबु अक्सर विदेश व्यापार यात्राहरूमा यात्रा, र उहाँले हजुरबा हजुरआमाले धेरै समय बिताए। धेरै वर्ष को लागि आफ्नो आमाबाबुले संग टुनिशिया र मोरक्को बस्थे। मिखाइल Margelov, एक बच्चा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रुचि र कूटनीतिक कर्मचारी बन्ने सपना देख्यो।
स्कूलमा माइकल राम्रो विद्यार्थी थियो, विशेष गरी एक कूटनीतिज्ञ बन्न इरादा, अन्य भाषामा मिल्दोजुल्दो हुन्छ। तर विद्यालय पछि म MGIMO मा, र मास्को राज्य विश्वविद्यालय को एशियाली र अफ्रिकी अध्ययन संस्थान गर्न गए। एम वी Lomonosova, ऐतिहासिक-philological संकाय। उहाँले विशेषता मा एक डिग्री संग 1986 मा उच्च विद्यालय स्नातक "orientalist र अनुवादक।" उहाँले अरबी, अंग्रेजी, फ्रेन्च बोल्छ, र पछि बुल्गेरियन सिके।
पनि अन्तिम विश्वविद्यालय वर्ष Margelov मा, त्यो CPSU को केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग मा एक अनुवादक रूपमा काम गर्न थालिन्। स्नातक पछि उहाँले अरबी सिकाउन KGB स्कूल साथ दिए। Detractors उहाँले गरेनन् काम लागि विशेष पूर्वापेक्षा रूपमा, केवल किनभने परिवार सम्बन्धहरु को एजेन्सी मा काम गर्न आएको दाबी गर्छन्। शिक्षण पोस्ट केवल एक स्क्रिन थियो कि एक सुझाव पनि छ, तर वास्तवमा त्यो KGB लप्टन साथ दिए। तीन वर्ष पछि, Margelov सम्पादक को स्थिति "ITAR-TASS" को अरबी संस्करण मा काम गर्न जान्छ। यहाँ उहाँले सबै वर्ष काम गरे।
तपाईंको स्थान फेला पार्न
जसको जीवनी अझै शुद्ध सोभियत परम्परा विकास भएको सोभियत संघ, मिखाइल Margelov, को पतन पछि, उहाँले नयाँ पेसा मा आफ्नो हात प्रयास गर्ने निर्णय गरे। उहाँले धेरै वर्ष को लागि संयुक्त रूसी-अमेरिकी कम्पनी सल्लाह, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श कम्पनीहरु मा काम गरे। विज्ञापन र पीआर - आफ्नो सीप र प्रतिभा को आवेदन क्षेत्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको, Margelov नयाँ फेला पार्न अनुमति यो अनुभव। यस समयमा, त्यो पत्रिकाको सम्पादकको रूपमा काम गर्दछ "तपाईंको छनोट।" यो पनि भविष्यमा यसको नयाँ व्यावसायिक क्षेत्र हुनेछ।
1995 मा, मिखाइल Margelov, नयाँ व्यापार विकास र परामर्श को निर्देशक को स्थिति को लागि एक ठूलो विज्ञापन कम्पनी "भिडियो अन्तर्राष्ट्रिय" मा काम गर्न आउँछ। 1996 मा उहाँले चुनाव अभियान र राज्य Duma मा पार्टी "Yabloko" को अगुवा थियो। निम्न वर्ष, त्यो रूसी संघ अध्यक्ष बोरिस Yeltsin मा उम्मेदवार समूह को चुनाव मा समावेश गरिएको थियो।
सफल अभियान Yeltsin गरेको Kremlin परिणाम र Margelov नयाँ स्थिति ल्याए। उहाँले राष्ट्रपति प्रशासन सार्वजनिक सम्बन्ध विभाग को पहिलो उप टाउको नियुक्त गरियो, यसको नेता थियो मिखाइल Lesin, माइकल "भिडियो अन्तर्राष्ट्रिय" मा काम कोसँग। केही समय पछि, Margelov Yassin यो स्थिति सफल र एक वर्षको लागि यसलाई बसे थियो। 1998 देखि, माइकल वी राजनीतिक देख्ने विभाग मा रिया "समाचार" को सेवा प्रवेश गर्छ। एक समय पछि उहाँले राज्य भन्सार समितिको सल्लाहकारहरू टाउको को एक समूह काम जहाँ भन्सार सेवा, गर्न छ महिना लाग्छ, र सार्वजनिक सम्बन्ध सेवा विकास गरिएको छ। त्यहाँ Margelov भन्सार सेवा कर्णेल गर्न बढुवा गरियो, तर चाँडै "Vesti" फर्के।
चुनाव को युग
1999 द्वारा, मिखाइल Margelov, प्रसिद्धि राम्रो स्पिन डाक्टर जित्यो, त्यसैले उहाँले धेरै परियोजनामा भाग लिन प्रस्ताव राखे। उसले सँगसँगै Kiriyenko मास्को को मेयर लागि चुनाव र राजनीतिक आन्दोलन "नयाँ फोर्स"। मिखाइल Margelov निर्देशक को स्थिति धारण जो 1999 मा Rosinformtsentr सिर्जना गरिएको थियो उत्तर काकेशस पुटिन आदेश मा स्थिति, को वृद्घि समयमा। एकै समयमा वरिपरि यो सर्गेई Shoigu एक विज्ञापन अभियान संगठित र राज्य Duma जान खोजे जो आन्दोलन "भालु", को प्रेस सचिव लागि निमन्त्रणा दिनुहुन्छ। पछि Margelov, पीआर-समर्थन "एकता" पार्टी सम्बन्ध गतिविधिहरु पूरा गर्न थाले। 2000 मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा रिपब्लिकन पार्टीका कांग्रेस मा "एकता" गुट को एक यात्रा सदस्य आयोजना गरिएको छ। 2000 Margelov विदेशी साझेदार संग सम्बन्ध स्थापना संग गर्नुहुन्छ जो पुटिन गरेको मुख्यालय, को भाग मा राष्ट्रपति चुनाव अभियान समयमा। को अध्यक्ष आफ्नो क्षमता देखाउन मदत सहित, यो अभियान को सफलता, र उहाँले अझै पनि जवान पीआर मानिस बिर्सनुहुन्न।
परिवार परम्परा अनुसार, Margelov Mihail सत्तारूढ पार्टी छेउमा सधैं थियो। त्यसैले, कुनै एक उहाँले संस्थान को Komsomol संगठनको सचिव हुँदा एक आश्चर्य रूपमा आएको छ। त्यसपछि उहाँले पार्टी को उन्मूलनको सम्म बसे जहाँ कम्युनिष्ट पार्टी, साथ दिए। को 2000s उहाँ "संयुक्त रूस" को एक सदस्य भए। उहाँले "संयुक्त रूस" को केन्द्रीय राजनीतिक परिषद को एक सदस्य थियो 2004 मा 2001 देखि पार्टी को राजनीतिक परिषद को एक सदस्य थियो।
मिखाइल Margelov - 2000 मा, पेस्कोभ क्षेत्र सर्वोच्च अधिकार नयाँ प्रतिनिधि छ। यो संघ परिषद पार्टी रेखाहरू साथ गठन गरिएको छ, र सँगी पार्टी सदस्य परिचालक शरीर मा माइकल मनोनीत। त्यहाँ उहाँले समूह को "पुटिन", "संघ" को initiator बन्नेछ। सांसद Margelov Mihail अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति को अध्यक्ष निर्वाचित भएको थियो। 2009 मा, उनले सीनेटरों को पहिलो उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा रक्षा गर्न जिम्मेवारी एक रिपोर्ट बुझाइएको जहाँ संयुक्त राष्ट्र साधारण सभाले, भाग लिए थियो। बारम्बार उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा मा विभिन्न वार्ता मा संघ परिषद को प्रतिनिधिमण्डल नेतृत्व। मा 2014 उहाँले भए बिदा गर्ने संघ परिषद मा जडान संग विवादास्पद आविष्कारको आफ्नो विदेशी अचल सम्पत्ति, जो उहाँले गरेको छैन मेड मा घोषणा।
2003 मा, संघ परिषद Margelov चुनिएको गति को रूसी संघ देखि उपाध्यक्ष-अध्यक्ष को सदस्यको रूपमा। मा 2008, उहाँले साहसी अडान रूपमा उम्मेदवार लागि राष्ट्रपतिको पद को संसदीय सभा को परिषद को युरोप, तर हराउछ गर्न स्पेनिश उम्मेदवार। गति मिखाइल वी मा काम बारम्बार संसारको विभिन्न "तातो" स्थलहरू मा संघर्ष को बन्दोबस्त मा भाग, प्यालेस्टाइन वार्ता मा टीम सभा सदस्य थियो। 2005 मा, स्वेच्छाले गति गर्न प्रतिनिधिको रूपमा resigned। आफ्नो सहायक Alexey Kozlov साथै, आफ्नो भाइ अफशोर व्यापार मा संलग्न गरिएको छ, ठगी लागि आपराधिक अभियोजन सुनाइसकेको थियो: यो कारणले जो Margelov वरिपरि बाहिर भङ्ग ठूलो घोटाले, थियो। तर 2010 मा उहाँले गति को एक मानार्थ सदस्य भए।
2008 मा, Margelov Mihail विदेशी मंत्रालय नियुक्त गरियो - उहाँले सुडान मा रूस को राष्ट्रपति को विशेष प्रतिनिधि थियो। आफ्नो काँध मा त्यस देशमा स्थिति को बन्दोबस्त भाग देशहरूको समूह मा रूस शामिल को कार्य खण्डमा। सुडान मा, राजनीतिक प्रभाव यस्तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, चीन र फ्रान्स रूपमा देशहरुमा दिइएको छ। Margelov र रूसी संघ समूहमा पाँचौ देश भएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न खोज्ने। उहाँले जुन बेलामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता पहिचान गरिएका छन् अन्तरराष्ट्रिय सुडान मा मास्को मा सम्मेलन, को मुख्य आयोजक छ दक्षिण सुडान को। Margelov तीन वर्ष मा उहाँले सुडान 8 यात्राको बनाउँछ, को Darfur विद्रोही संग वार्ता संलग्न छ। 2010 मा, त्यो स्वतन्त्रता मा एक referendum मा सुडान को समर्थन लागि प्रस्ताव बनाउँछ जो संयुक्त राष्ट्र साधारण सभाले को सुरक्षा परिषद, मा उच्चतम स्तर मा एक बैठक मा भाग।
2011 मा, देश मा अहम समस्या समाधान जडानमा Margelov यसको मिशन देखि जारी छ।
2011 मा, एक प्रमुख नयाँ जिम्मेवारी Margelov स्थिति - राष्ट्रपति को विशेष प्रतिनिधि अफ्रीका को मानिसहरूका साथ सहयोग मा। धेरै वर्ष को लागि perestroika पछि रूस छैन अफ्रिकी महादेशमा मा उपस्थित थियो र यसको पूर्व प्रभाव कम्तिमा भाग फिर्ता गर्न - यो माइकल Vitalievitch को कार्य थियो। आफ्नो सहभागिता साथ कार्यान्वयन गर्न थालेका छन्, इथोपिया, नामिबिया, नाइजर र अन्य देशहरूमा रूसी परियोजनाहरू। उहाँले पटक-पटक, स्वतन्त्रता को लागि संघर्ष गर्ने सोमाली क्षेत्रहरूमा प्रतिनिधिको संग सम्पर्क स्थापित गर्न सहित, अफ्रीका गए। लिबिया मा स्थिति को "विस्फोट" मा, त्यो अवस्था एक उद्देश्य तस्वीर गठन गर्न दुवै पक्ष संग भेट भएको थियो। अन रूसी जहाज सुरक्षित पारित मुद्दा सम्बोधन यसको महत्वपूर्ण भूमिका एडेन को खाडी। 2014 मा, Margelov, रूसी संघ परिषद को प्रस्थान संग जडान मा पोस्ट बाँकी।
को भारी, विविध गतिविधिहरु भए तापनि विभिन्न सामाजिक आदेश सामना गर्न Margelov समय। उहाँले रूसी भौगोलिक समाज को एक सदस्य हो, को रूसी व्यावसायिक हक्की लिग न्यासी को बोर्ड को अध्यक्ष थिए। 2003 मा पनि उहाँले गैर-सरकारी संगठनको अध्यक्ष भए - एकात्मकता र एशिया र अफ्रिका को सहयोग को लागि रूसी समाज। यो पोस्ट को भाग रूपमा Margelov को क्रांतियों प्रभावित देशहरूमा विभिन्न विरोध समूहहरूसँग वार्ता मा भाग छ।
मिखाइल Margelov - 2014 देश मा नयाँ "तेल मानिस" छ। उहाँले रूस र सीआईएस देशहरुमा इलाका तेल र तेल उत्पादन को यातायात मा लगे उपाध्यक्ष को स्थिति, आए जसमा "Transneft"। सार्वजनिक सम्बन्ध - Margelov पनि आफैलाई लागि सामान्य कुरा सामना गर्न अभिप्रेरित। हुनत "लगाए" भनेर संस्करण छन् यसलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोण संग एक कम्पनी हो, र त्यो, सायद, मिखाइल वी चाँडै कदम हुन सक्छ। तर चाँडै यी आन्दोलनहरु गर्दा, र देख्ने Margelov बस उसलाई तर्साउने कि विभिन्न समस्या मा "Transneft" शरण लिए भन्छन्।
आलोचना र आरोप
Margelov गरेको detractors यसको प्रगतिशील उकालो आन्दोलन ठूलो परिवार सम्बन्ध व्याख्या। यसलाई कारण वास्तवमा गर्न कम्पनी गर्न कम्पनी आफ्नो हालने कुनै मूल्यवान कौशल उहाँले छैन भने छ। गाह्रो छ तापनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वार्ता मा सूचना छैन उल्लेखनीय सफलता Margelov। उहाँले अझै पनि गोप्य "पुर्खाहरूको" को काम जारी छ र गोप्य सेवाहरूको एक अधिकारी हो भनेर आरोप छ। उहाँले वास्तविक अमेरिकी गोप्य सेवाहरू विरुद्ध विदेश सम्पत्ति र पूर्वाग्रह को अवैध सम्पत्तिको आरोप छ। यो सबै, मियामी मा अपार्टमेन्ट बाहेक, कुनै पुष्टि फेला, त्यसैले माइकल वी शान्तपूर्वक रूस मा काम गर्न जारी छ।
पुरस्कार र शीर्षक
आफ्नो जीवनकालमा Mihail Vitalevich Margelov आदर र मैत्री, को आदेश सहित धेरै पुरस्कार प्राप्त गरेको छ सम्मान को प्रमाणपत्र र कृतज्ञता रूसी राष्ट्रपति गर्न, विभिन्न पदक। उहाँले 1st डिग्री को रूसी संघ को राज्य सभासद श्रेणी पहनता। unspeakably खुसी हजुरबुबा भन्दा सेवानिवृत्त कर्णेल छ।
राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक तथ्याङ्कले को निजी जीवन सधैं विशेष चासो हो। मिखाइल Margelov, आफ्नो पत्नी र छोराछोरीलाई कुनै अपवाद छन्। उहाँले विवाह 25 भन्दा बढी वर्ष पहिले, उहाँले दुई छोराछोरीलाई बढ्छ। पत्नी को पेशा ज्ञात छैन। बारेमा दिमित्री मिडिया छोरा उहाँले मास्को राज्य संस्थान देखि स्नातक कि बाहिर फेला, उहाँले Gazprom काम अब कम्पनी को निदेशक मंडल को टाउको "रस-तेल।"
इक्वेडर झण्डा र हतियार यसको कोट
रूस को आधुनिकीकरण को एक अभिनव तरिका हो।
"Afrin" स्प्रे: प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
पूल "Zhemchuzhinka" (युमेन)। बच्चाहरु र गर्भवती महिलाका लागि Akvaklub आदर्श
ग्याँस "Lemax" बयलर: समीक्षा, विनिर्देशों र मूल्य
जब म rehydron लिनुपर्छ? प्रयोग को लागि निर्देशन
स्काउट चक्कु HP-40 नमूना 1940
सीलेंट कसरी स्वास्थ्य dries? प्रयोग, संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन
एक खुसी अन्त्य बिना एक उपन्यास: बेन Affleck र जेनिफर गार्नर